I-China ATC izinkuni cnc 1325 ifektri kanye nabakhiqizi | JCUT
Umshini wokusika weLamino machining Center ngumshini okhethekile osetshenziselwa ukusika ifenisha eyenziwe ifenisha eyenziwe ngokwezifiso. Ingasusa imodi yendabuko yokusika futhi ithembele emisebenzini ebhukwayo. Iyakwazi ukukhiqiza okukhaliphile ngokuhlanganiswa komklamo, i-disaslaka ne-softwareetting software.
1. Amathuluzi ayishumi nambili agodlwe amamagazini wokushintsha amathuluzi aqonde umugqa oqondile, futhi amathuluzi ayishumi nambili angashintshwa ngokukhululeka ukuze ahlangabezane nemisebenzi enamandla yokucubungula.
2. Ekuhlaziyeni kokugcina, izinzuzo zokuvula kwe-lamino zilethwa ngenqubo yokuhlangana yomhlangano engabonakali engenziwa. Izinzuzo zokuxhumeka okungabonakali kwe-lamino zenza ukuvula kwe-lamino ithandwa kakhulu. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zokuxhumana ezingabonakali, ifomu lokuhlangana kwe-lamino engabonakali lisebenziseka kalula ukufaka nokuhlangana. Isidingo kuphela sokufaka ucezu lokuxhuma ku-crescent groove, amapuleti amabili acindezelwa ngokuqinile Yikho.
3. Kuthatha isikhathi esifushane ukuhlanganisa ifenisha ngezicucu ze-lamino zokuxhuma ezingabonakali, abantu abangu-1-2 bangaqeda umhlangano wefenisha yonke, ukonga isikhathi nomsebenzi. Ngakho-ke, umshini wokusika weLamino udumile futhi uthandwa kakhulu.
4. I-aesthetics yesixhumi se-lamino isixhumi-indlela ephumelelayo yokukhiya, umklamo omuhle; ubuchwepheshe-obuqambiwe obugxiliwe, ukuxhumana okuqinile; umhlangano we-disassembly-elula ne-disassembly, izikhathi ezingenamkhawulo; okungabonakali ngokuphelele --- Ikhabethe alibonakali ngokuphelele, ikhwalithi ephezulu kakhulu; ukusebenza okuhlukahlukene / ukucatshangelwa kokudala okuphelele, ukusetshenziswa kwendawo yanoma yiliphi ipuleti.
Umshini wokusika weLamino machining Center ngumshini okhethekile osetshenziselwa ukusika ifenisha eyenziwe ifenisha eyenziwe ngokwezifiso. Ingasusa imodi yendabuko yokusika futhi ithembele emisebenzini ebhukwayo. Iyakwazi ukukhiqiza okukhaliphile ngokuhlanganiswa komklamo, i-disaslaka ne-softwareetting software. Izingxenye ezingabonakali zeLamino uhlobo olusha lwesixhumi sefenisha yokuxhuma; sonke siyazi ukuthi ukwakheka okujwayelekile kwefenisha yephaneli kuyinto yokuxhuma kathathu. Abathathu-in-one kungashiwo ukuthi bayisakhiwo esidingekayo sefenisha yephaneli. Kodwa-ke, ukwakheka kokukodwa kokunye kunamaphutha athile asetshenziswa ngokoqobo, angahlangabezani ngokuphelele nezidingo zokwenza ngokwezifiso kwekhasimende. Ikakhulu uma Amakhasimende ecela ukwenza amakhabethe odonga ahlanganisiwe noma amakhabethe egobile, amathathu-ku-munye angenziwa kuphela kuma-engeli angakwesokudla.
Isizukulwane sesithathu se-Longteng R20 - i-saw blade + Linear ATC CNC Router
Indawo yokusebenza （S * Y * Z）
Length ubude bokwesekwa 00 2800 ukwenza ngokwezifiso）
I-GDZ 9KW * 1 + ibone blade
Amathuluzi ayi-12 （asekela amathuluzi ayi-16 ngokwezifiso）
UDorna 1500W ukhonza izimoto
Ukusekela i-driver driver
Ijubane lokushintsha ithuluzi
Uhlelo lwe-Taiwan syntec
I-TBI Original 25 yesitimela sikwele
I-TBI Original 25slider
I-TBI 2510 Ibhola isikhafu
Intambo yeketanga evikelekile ephezulu
Ikhethekile ngomshini wokusika
I-100000MM / MIN
Umjikelezo wamanzi 7.5KW
Isikhwama esiphindwe kabili ku-5.5KW
Isakhiwo sesithathu se-patent yesakhiwo se-patt （ozimele
Umbhede oshubisayo wokuguga oshubile (okugaya ubuso obuhlanu kanye nokushayela u-0.02mm ngokunemba)
I-Crossbeam ewugqinsi udonga lwesikwele nobuchwepheshe be-strip welding synchronous bed machining lonke isakhiwo sekholamu
Ikhomishini yokusebenza kwekhompyutha
Uchungechunge lwekhabethe le-Longteng patente, livalwe ngokuphelele i-screen enkulu nekhampasi yokusebenza kwekhompyutha
z izingxenye ze-axis
Umsebenzi we-Z axis motor Lock, isihlalo sokusekela se-Z axis motor screw
Itafula le-Vorum adsorb
Ukuqamba kwamalungelo obunikazi i-50MM adsorption caliber, ukuxhumeka kwamapayipi wePP uphawu okuhle, musa ukusebenzisa ipuleti
Indlela yezinzwa yamathuluzi
Inzwa yamathuluzi ezenzakalelayo
Isilinda esisetshenziswa emaceleni omabili, esine-aluminium strip
I-othomathikhi eqondile yethayela eline-othomathikhi le-othomathikhi
I-okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo ukwahlukanisa uthuli okuhlanganisiwe nokususwa kothuli lwesibili.
Esedlule: Ezomnotho ezine inqubo yokwenza umshini wokusika izinkuni u-R4
Olandelayo: I-1325 ezine spindle nge-line ye-ATC
Imishini emibili yokushayela yomugqa we-spindle
Umshini womshini we-spindle wokhuni we-cnc